« Le Roi Lion Sécurité » Tapa-kevitra hiady amin’ny tsy fandriampahalemana
Mitsangana ara-panjakana rehefa nahazo fankatoavana tamin’ny « Préfet de police Antananarivo » ny Sté Le Roi Lion Sécurité tarihan’ny filohany Mamihafatra.
Hanome asa an’ireo tanora tsy an’asa tsy ankanavaka eto amintsika no tanjon’ity orinasa ity, hoy ity filohany ity, nefa ho laharam-pahamehana amin’izany ireo tanora mpanao rugby sy ireo olona nahavita ny fanompoam-pirenena ka manana ny « Certificat de bonne conduite » mazava. Famaliana ny antson’ny fanjakana hiady amin’ny tsy fandriampahalemana no antom-pisianay ka fiarovana ny olona mivarotra eny an-tsena sy mpividy mandeha an-dalambe no hatao amin’izany, hoy ihany Atoa Mamihafatra. Eto amin’ny tsenan’Analakely no hanombohana ny asa dia hitarina eny amin’ny tsena rehetra eto an-drenivohitra avy eo ary mbola hapariaka any amin’ny Faritra ihany koa. Tsy manao « Gardiennage » na mitondra entana ny Sté Le Roi Lion fa miaro ny ain’olona sy misambotra ireo olon-dratsy eny an-tsena ka hatolotra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana izay tratra (matotra ny fiaraha-misa amin’ny zandary sy polisy). Ny « Droit de sécurité » halaina amin’ireo mpivarotra isan’andro, 500 ar any anaty trano ary 300 ar ety ivelany no hoentin’ny Sté Le Roi Lion Sécurité miasa. Mpiasa miisa 25 lahy no manao andrana mandritra ny herinandro nanomboka ny talata 07 aogositra teo eny amin’ny tsenan’Analakely ka mbola tsy naka ny “Droit de sécurité” akory izy ireo amin’izany.